Shirkadaha Daallo iyo Jubba Oo Dhaqaalo Badan Ka Qaada Dadka Xujeyda Ah
Tuesday April 17, 2018 - 14:14:22 in Wararka by Abdi A.
Hargeysa-(Caalami-News)-Shacabka Somaliyed muddo badan waxaa haysatay walaaca ku aadan lacagta faraha badan ee laga qaado xujeyda Somaliyed, lacagtaasi oo ay ka qaadaan Shirkadaha Diyaaradaha ee kala ah Jubba iyo Daallo.
Iyadoo ay jirto dhaqaalahaasi badan ee dadka uga baxaya arrimaha Xajka, ayaa masuuliyiinta Shirkadaha Daallo iyo Jubba waxa ay bilaabeen inay ka soo horjeestaan isla xisaabtan iyo dabagal lagu sameynaayo dhaqaalaha iyo nidaamka shacabka ay uga qaadaan.
Aqalka Sare ee dalka ayaa todobaad ka hor ka hadlay arrimaha Xajka, waxaana Senotaro ka tirsan Aqalka Sare ay soo bandhigeen sida shacabka Somaliyed dhibaatada ay ugu qabaan lacagaha faraha badan ee laga qaado xujeyda.
Xubnaha Aqalka Sare ayaa u doodaya shacabka Somaliyed, maadaama muddo ay jirtay cabashada bulshada ee la xiriirta dhaqaalaha badan ee laga qaado dadka, laakiin aysan jirin dowlad isla xisaabtan dhab ah ku sameysa arrimahaasi.
Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Somaliya ayaa milkiyad ku leh labadan Shirkadood, waana midda keentay in Golaha Shacabka aysan aad uga hadli karin arrimaha ku aadan dhibaatada labadan Shirkadooda ay ku hayaan shacabka.
Markii Aqalka Sare uu bilaabay isla xisaabtanka ku aadan dabagalka iyo sidii loo yareyn lahaa dhaqaalaha laga qaado Xujeyda, ayaa arrintaasi waxaa durba qaylo dhaan ka keenay masuuliyiin u hadlay Shirkadahan oo diidan isla xisaabtanka dhabta ah ee lagu sameynaayo.
Dad xujeey ah oo Shirkadahan adeegyo kala duwan ay u qabteen, ayaa sidoo kale sheegay in marka hore Muqdisho marka laga kaxeynaayo qofka loo sheegaayo in loo qabanaayo hawlo badan oo ay ka mid yihiin meelaha la dajinaayo oo meel wanaagsan ah iyo hawlo muhiim ah loo qabanaayo, balse marka Sacuudiga la tago arrimahaasi oo dhan aysan waxba ka jirin.
Somaliya oo hadda ka soo kabanaysa marxalad bur bur ah ayaa dadka dhibaatooyinka dalka ku haayo waxaa ka mid ah ganacsatada Somaliyed oo kuwa diyaaradaha ay ku jiraan, kuwaasi oo soo kireysta diyaarado liita oo halis ku ah nolosha dadka raacaya, iyadoo uusan jirin damaanad qaad buuxa oo ku aadan haddii dhibaato ay dhacdo.
Diyaaradaha qaar ayaadanba u quureyn shaqsi ahaan inaad raacdid, maadaama ay yihiin kuwa qaraab ah, aduunka intiisa kalena laga mamnuucay, balse Somalida ganacsatadooda ay ku indha adeegayaan isticmaalkooda.